Slackware ကိုသွင်းပြီးသည့်နောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ လျင်မြန်လွယ်ကူတဲ့လမ်းညွှန် | Linux မှ
Slackware ထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ။ လျင်မြန်လွယ်ကူသောလမ်းညွှန်
မင်္ဂလာပါ FromLinux မှသူငယ်ချင်းများ၊ အချိန်ကြာပြီးနောက်ဘာမှပို့စရာမလိုဘဲဒီမှာပြန်လာပါ။ ဒီနေ့ install လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့ Slackware ဘယ်လိုအဆင်သင့်ပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုငါပြမယ်။
1 Slackware ကိုဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ။
3 Slackware ကိုသွင်းပြီးသည့်နောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
3.2 sudo ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအားဖွင့်ပါ။
3.4 repositories ကိုပြုပြင်ပါ။
3.7 နှစ်မိနစ်မှငါးစက္ကန့်အထိ lilo စောင့်ဆိုင်းခြင်းကိုပြောင်းပါ။
3.8 Package များကို sbopkg မှမည်သို့ install ရမည်နည်း။
3.13 64 bit system ကိုအသုံးပြုလျှင်
3.14 Flash ကို:
3.16 Libreoffice ကိုဘာသာပြန်ပါ။
3.17 ၃၂ bit
3.18 ၃၂ bit
3.20 Skype ကို:
3.23 သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် KDE အတွက် launcher menu အသစ် (ပုံအတိုင်းတွင်):
ငါအပြောင်းအလဲလုပ်တာ ၅ လကျော်သွားမယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ် debianaတော့ openSUSE ငါ၏အဆာဗာများအပါအဝင်ငါ့အလိုရှိသမျှစက်တွေပေါ်မှာ။ အခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောခဲ့သလိုပဲ .. openSUSE ထွက်သွားပြီဆိုလျှင် SUSE ဤရွေ့ကား Slackware မှလာသည်။ Slackware သည်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ထိုအခါငါကကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် :) ။
ငါဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့လို့ ၀ မ်းသာအားရပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ် slackpkg, installpkg, sbopkg Slackbuilds ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာရှင်းနေပါသည် debian, Fedora, RHEL, SUSE, မုတ်, etc ...
Slackware ကိုမိနစ် ၂၀ တွင်တပ်ဆင်နေစဉ်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေသည့်တစ်ခုတည်းသော distro မှာ Gentoo ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စုဆောင်းချိန်နှင့်ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ခြင်းမရှိခြင်း - D.
ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းသည်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာချစ်မြတ်နိုးခဲ့သော၊ ကျွန်ုပ်သည် RHEL ညီအစ်ကိုများနှင့်သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များမှတဆင့်ကူးပြောင်းခဲ့သော Linux ၏ဖခင် Debian ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်လုံးဝဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် SUSE ၏မိခင် openSUSE ၏လွတ်လပ်သောဌာနခွဲ၏သမီးတစ်ယောက်မှ မကြုံစဖူးကမ္ဘာသို့လမ်း။ Linux ဖြန့်ဝေမှု၏မိခင် .. Slackware: D.
ရှည်လျားတဲ့လမ်းကကျွန်တော့်ကိုစစ်မှန်သော Linux လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ Unix နဲ့တော်တော်ဆင်တူတဲ့ကမ္ဘာ။ packages များပြုစုသောကမ္ဘာ။ Application တစ်ခုကိုတပ်ဆင်လိုသောအခါ junk packages များတပ်ဆင်ခြင်းမပြုပါကကမ္ဘာကြီးသည်၎င်းတို့၏မှီခိုမှုများကိုသာလိုအပ်သည်။ တည်ငြိမ်မှုကမ္ဘာတစ်ခု။ versiontitis နှင့် dystrotitis မရှိဘဲကမ္ဘာ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤ distro သည်လက်ရှိဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် update လုပ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုပေးရန် - ပျင်းရိ 14.1 ဒါဟာထွက် 7.11.2013 တွင်ထွက်လာ၏။ ငါတို့တွေအားလုံး OpenSSL နှင့်မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုငါတို့အားလုံးသိပြီးအဓိက distros များသည်သူတို့၏ OpenSSL ဗားရှင်းများကိုပြင်ဆင်လိုက်သည်ကိုငါတို့အားလုံးသိကြပြီ။ Debian or RHEL မှာမူသူတို့ version 1.0.1e ကို patched လုပ်သည်။ ပျင်းရိ 14.1 ၎င်းဗားရှင်းနှင့်လည်းထွက်ပေါ်လာသော်လည်းထို bug ကိုတွေ့သောအခါ version 1.0.1g ကိုတည်ငြိမ်သောဌာနခွဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤ distro သည်အမှားအယွင်းများပိုမိုဖြစ်စေနိုင်သော patch များကိုပြုလုပ်မည့်အစားတရားဝင်မူကွဲကိုထည့်ရန်ရွေးချယ်သည်။
အဲဒါကြောင့် Slackware ကိုငါ့စက်တွေ၊ ဆာဗာတွေပေါ်မှာသိမ်းထားပြီးဒီမှာနေဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ ဤလများအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ဤ distro ကိုအလွန်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဤအဆင့်သည်မှန်မမှန်သိရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြေဟုတ်ကဲ့ .. အမေဟုတ်ကဲ့
။ ဤသည် distro ငါ့ကိုအောင်ပွဲကိုငါ့ကိုသိမ်းသွား။ သံသယမရှိဘဲငါကြိုးစားခဲ့တာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်မှာတခြားစကားလုံးမရှိဘူး
နောက်ထပ် ado မရှိရင်, ငါ့စနစ်၏အချို့ပုံရိပ်တွေ:
ရိုးရှင်းစွာ install လုပ်ခြင်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသွားပါ။ ၎င်းသည် text mode ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ဆင့်ချင်းစီလမ်းညွှန်ပေးသည်။
သင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ key ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး၎င်း key add နှင့်အတူအလိုအလျောက်ဖြည့်စွက်ထားသောအုပ်စုမျဉ်း၏အဆုံးကိုနှိပ်ပါ - ဘီး နှိပ်လိုက် ဝင်ရောက်.
စာရွက်စာတမ်းကို CTRL + O ဖြင့်သိမ်းဆည်းပြီး CTRL + X နှင့်ပိတ်ပါ။
ရရှိနိုင်သည့်ဘာသာစကားအားလုံးစာရင်း ဒေသတွင်း -a
အစားထိုးတင်ပို့မှု LANG = en_US:
setenv LANG EN_US ကိုအစားထိုးပါ။
စပိန်တွင် repos မရှိသောကြောင့်ပေါ်တူဂီ၏လင့်ခ်များကိုဖြုတ်ပစ်ပါ။
slackpkg update ကို slackpkg update gpg slackpkg အဆင့်မြှင့် - အားလုံး
နှစ်မိနစ်မှငါးစက္ကန့်အထိ lilo စောင့်ဆိုင်းခြင်းကိုပြောင်းပါ။
အချိန်ကုန် = ၂၀၀၀ နှင့်အစားထိုးပါ -
ယခုကျွန်ုပ်တို့အလွန်အသုံး ၀ င်သော tool တစ်ခုကို install လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပရိုဂရမ်များကိုစုစည်းပြီးထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
Slackbuilds.org တွင်ရရှိနိုင်သည့်ပရိုဂရမ်များ၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ update လုပ်သည်။
Package များကို sbopkg မှမည်သို့ install ရမည်နည်း။
ထိုအထုပ်ကို http://slackbuilds.org/ တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မှီခိုမှုအားလုံးကိုသတိပြုပါ။
ပြီးရင် run လိုက်ပါ။ sbopkg -i "ပါးလွှာသော" (၎င်းသည်ပါးလွှာသောတပ်ဆင်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်) ။ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းလိုသော package ကိုမထည့်မီ၎င်းင်း၏မှီခိုမှုအားလုံးကိုထည့်ထားကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။ ယခုအခြေခံပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သည်။
sbopkg -i "orc texi2html libebml libmp4v2 libcuefile libreplaygain ခြေဆွံ့သောသူ x264 a52dec faad2 speex twolame lua portaudio libass libavc1394 libdc1394 libdca libdvbpsi libdvdcss libdvdnav libmatroska libmpeg2f libdcdbbbbdcbdvd
32 bit system ကိုအသုံးပြုလျှင်
Oracle မှ jdk ကို 7u51 ဗားရှင်း (jdk-7u51-linux-i586.tar.gz) တွင်ကူးယူပါ။
slackbuild ကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်သည်။
jdk-7u51-linux-i586.tar.gz ဖိုင်ကိုငါတို့အစောပိုင်းက unzipped လုပ်ပြီး script ကို run ပါ။
ဤကဲ့သို့သော installable package တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည် (သင်ထုတ်လုပ်လိုက်သော package ၏လမ်းကြောင်းနှင့်အမည်ကိုသင်အမြဲတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်) ကျွန်ုပ်တို့ကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူထည့်သွင်းမည်
64 bit system ကိုအသုံးပြုလျှင်
Oracle မှ jdk ကို 7u51 ဗားရှင်း (jdk-7u51-linux-x64.tar.gz) တွင်ကူးယူပါ။
jdk-7u51-linux-x64.tar.gz ဖိုင်ကိုငါတို့အစောပိုင်းက unzipped လုပ်ထားတဲ့ script ကို run ပါ။
libreoffice-helppack နှင့် libreoffice-langpack slackbuilds ကိုကူးယူပါ။
download လုပ်ထားသောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ unzip လုပ်ထားသည်။
ကျနော်တို့ libreoffice package ကို download လုပ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာ slackbuid ဖိုလ်ဒါများ၌ decompress မလုပ်ပဲ paste လုပ်ပြီး script နှစ်ခုလုံးတွင်လုပ်ဆောင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်ထားသော package များကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သည် (သင်ထုတ်ပေးသော package ၏လမ်းကြောင်းနှင့်အမည်ကိုသင်အမြဲမြင်ရလိမ့်မည်):
Unzip ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲဤဖိုလ်ဒါရှိ teamviewer အထုပ်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။
package ကို start list ထဲထည့်လိုက်ပြီ။
လျှင် [-x /etc/init.d/ufw]; ထို့နောက် /etc/init.d/ufw fi ကိုစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် firewall ကို enable လုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါက ssh ကိုခွင့်ပြုမည်။
သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် KDE အတွက် launcher menu အသစ် (ပုံအတိုင်းတွင်):
ထိုအခါ voila .. ဒီသူတို့နှင့်အတူယေဘုယျအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်စနစ်တစ်ခုကိုရယူ: D. ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားကြည့်ရတာအဲဒါခက်ခဲပုံမရဘူး။ မှတ်ချက်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့်။ linuxeros ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Slackware ထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ။ လျင်မြန်လွယ်ကူသောလမ်းညွှန်
ထို့အပြင် (vector linux) သည် Slackware ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်ဆင်တူသည်
ငါမင်္ဂလာပါ =) လို့ပြောဖို့ဖြစ်ပျက် ...
Slackware တွင်ဖခင်မရှိပါလိမ့်မည်။ လအနည်းငယ်တွင်သင်သည် "linux from from scratch" ကိုသင်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ သင်၏စက်များနှင့်ဆာဗာများအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုလအနည်းငယ်အတွင်းမှာငါသက်ဆိုင်သည်။ corresponding သက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန် with
ဒီလိုအရူးလုပ်တာကိုငါစိတ်ကူးလို့မရဘူး။ Slackware နဲ့ Gentoo တို့အကြားဒီအကြောင်းကိုငါစဉ်းစားနေတယ်။ ငါ Debian ဖခင်ဆီက Slackware အမေဆီကိုသွားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့ကျရင်ငါကွန်ပျူတာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်မယ်လို့သံသယဝင်နေတဲ့ငါ့ရဲ့လေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့ operating system Debian ... slackware ထည့်သွင်းခြင်း၏စိတ်ကူးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်ုပ်စိတ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်အချို့သောအရာများကိုနားမလည်သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အတွက်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်လာသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ သင်ပြောသည့်အတိုင်း Gentoo သည် (“ နည်းနည်း”) ယူသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နောက်မှဖြစ်လိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ slackware နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်များသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအကြောင်းထပ်မံဖတ်ရှုရန်နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ပေါ်ပေါက်လာသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူခက်ခဲသောဖြစ်စဉ်များကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
Slackware ဆိုတာတပ်ဆင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်တယ်၊ မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပြီး၎င်းသည်အတည်ငြိမ်ဆုံး (သို့သော်တကယ်) ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတွင် CentOS ထက် bug နည်းမှုနည်းပါကကျွန်ုပ်၎င်းကိုစမ်းသပ်စဉ်ကပြသနာ0ရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
အပြင်ကထုပ်ပိုးခြင်း၊ Debian သည်တည်ငြိမ်သောကုန်စည်များနှင့်တည်ငြိမ်စွာလွှတ်တင်လိုက်ခြင်းသည်အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် GNU / Linux ၏ Universal စာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူလွတ်လပ်မှုသည်ပရိုဂရမ်များအကြားပcanိပက္ခများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုရှာဖွေရန်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အချိန်လိုအပ်သည်။ Slackware သည်၎င်း၏တရားဝင်ထုပ်ပိုးမှုနှင့်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း Slackbuilds သည်တရား ၀ င်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ခြင်းမရှိသောအချိန်ကုန်လာသောအခါသူတို့တွယ်ကပ်မိနိုင်သည်။ Debian မှာတောင်မှကျွန်တော်သည် packets တော်တော်များများနှင့်ကြုံခဲ့ရလျှင် Slackbuilds သည်၎င်းကိုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပြင်ပကှကျနှင့်အတူလုံခြုံရေးပြproblemနာလည်းရှိပါတယ်: အမှားတစ်ခုတွေ့ရှိလျှင်သူတို့ကမွမ်းမံကြမည်နည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်စွန့်ပစ်ထားသည့်ပရိုဂရမ်များအမြဲရှိသည် (သို့မဟုတ် uploaders များကစွန့်ပစ်သည်), အရာဝတ္ထုများသည်မကောင်းသောအရာများနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် CentOS ခံစားခဲ့ရသောအရာဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်အကြာတွင်ပြproblemနာမရှိ (ဤကဲ့သို့သောအရာသည်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး၊ အခြားသူများအားလုံးနှင့်အတူတစ်ခုခုအမြဲတမ်းပေါ်ထွက်လာသည်။ ) သို့သော်ပြင်ပသိုလှောင်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ ဗဟိုစနစ်ကအရမ်းအားကောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့သင်အသုံးပြုမဲ့ဘယ်သူ့ကိုမဆိုသုံးလို့ရမယ်၊ ဥပမာအားဖြင့် Slackware သည် virtualize (LXC) အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းကိုရယူရန်သင် Slackbuilds သို့သွားရပေမည်။
မင်္ဂလာပါ OtakuLogan နှင့်တန်ဖိုးရှိရှိမှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ D. ငါ Debian သို့မဟုတ် RHEL / CentOS ၏တည်ငြိမ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ ငါမင်းပြောခဲ့တဲ့အငြင်းပွားမှုနှစ်ခုကိုငါဖြတ်ပြီးမင်းတရားဝင် repo ကိုသုံးတိုင်းမင်း 99% မှာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ CentOS ကို rpmfusion, Adobe နှင့် epel ၏ repos ကိုထည့်လျှင်အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤ repos မှသင် install လုပ်မည့် packets များသာမကသူတို့ install လုပ်သော junk packages များနှင့်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်ကွာဟချက်များကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါ။
slackbuilds နှင့်အတူဤကိစ္စသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ သင်သည်မည်သည့် package များနှင့်မှီခိုမှုများကိုသင်တပ်ဆင်မည်ကိုသင်သိပြီး slackbuilds နှင့်သင်တပ်ဆင်လိုသည့် software ၏မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်သော package တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှ install လုပ်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ slackbuilds သည်အရင်းအမြစ်ကုဒ်နှင့်အလုပ်လုပ်ပြီးအထုပ်ကိုသင်၏စနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ကြောင်းသတိရပါ။ slackbuilds တွင် package များနှင့်စမ်းသပ်ထားသော package များသာတည်ငြိမ်သော version ကိုသာထုတ်ဝေသည်ကိုသင်သတိရသင့်သည်။ ဥပမာ - တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ VLC ကိုမူဗားရှင်း ၂.၁.၃ တွင်ရနိုင်သည်။ slackbuilds တွင်မူ ၄.၁.၁ ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာစနစ်၏မတည်ငြိမ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာအတွက် package များကိုစုစည်းထားကြောင်းသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကသင်၏ pc ၏မတည်ငြိမ်မှုကို 2.1.3 သို့လျှော့ချပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မတည်ငြိမ်မှုသည်ပရိုဂရမ်ကိုယ်တိုင်ကိုသာထိခိုက်လိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကို Virtualbox ကိုအနည်းငယ်အရသာလုပ်ရန်အကြံပြုသည်နှင့်ဤ distro ၏အားသာချက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ငါသည်လည်းသင်တို့အဘို့ငါ Slackware ကြိုးစားနေမတိုင်မီသင်တို့ကိုငါကဲ့သို့တူညီသောအမြင်ရှိသည် D. : D.
လာပါ၊ ဒါကြောင့်ငါ့ကို slackware ကိုပြန်ချင်လာတယ်။
ငါ slackware မှီခို install လုပ်ပြီးလှိမ့်ချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အရာအားလုံး haha ​​ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ slackware ကို debian သို့မဟုတ် gentoo ထက်ပိုနှစ်သက်တယ်။
ကောင်းပြီ၊ ပြန်လာဖို့ပြောထားတယ် .. Slackware မှာလက်ရှိဌာနခွဲရှိတယ်။ သင်ကလှိမ့်နေပြီ။ 🙂
၎င်းအတွက် Arch ရှိနေသည်။ ၎င်းသည်လှိမ့်နေပြီး ABS နှင့် PKGbuilds နှင့် Slackbuilds နှင့်အတူတူပင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ makepkg -s ဟူသော command ဖြင့်လိုချင်လျှင်မှီခိုမှုများကိုအလိုအလျှောက်သင်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်။
ငါတွေ့မြင်ခဲ့သည့်အရာမှ Arch Linux ကိုကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်။ Slackware သည် Arch နှင့်ပတ်သက်သောအားသာချက်အချို့ကိုငါ့ကိုသင်မပြောနိုင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခုတိုင်မတွေ့ရသေးသောကြောင့်
အားလုံးသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှိသည်။ သင်တစ် ဦး ကိုငြီးငွေ့သောအခါသင်အခြားသို့ပြောင်းသည်၊
သင် windows7ကိုအသုံးပြုသည်
မင်းရဲ့အဖြေကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ငါထည့်သွင်းစဉ်းစား, အနည်းဆုံးငါက virtualized စမ်းသပ်ဖို့သင့်ရဲ့လမ်းပြအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အလွန်ကောင်းသောလမ်းညွှန်, ငါတို့ကတစ် ဦး စမ်းပါရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင်ပြောသည့်အရာမှအထုပ်တစ်ခုမထည့်သွင်းမှီမှီတွင်မှီခိုမှုများကိုသင်ကြည့်ရှုရမည်။ ငါအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ၎င်းသည် linux ထက် Bsd ပုံစံပိုမိုသည်ဟုထင်ရသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
တကယ်ပါပဲ။ မှီခိုမှုအားလုံးကိုပရိုဂရမ်ကိုယ်တိုင်မတိုင်မီ install လုပ်ရမည်။ အားသာချက်တစ်ခုမှာ sbopkg ကိုသင်ထည့်သွင်းပြီးကတည်းကဖြစ်သည်။ ဥပမာ - VLC ကို install လုပ်ရန် command ကိုကြည့်ပါ။ vlc မတိုင်မှီ (command တစ်ခုတည်းတွင်) အရာအားလုံးသည် VLC ပေါ်တွင်မူတည်သည်သို့မဟုတ် VLC လိုအပ်သည့်ပရိုဂရမ်များဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် sbopkg ကို command တစ်ခုတွင်အဆုံးသတ်မှီခိုမှုများနှင့်နောက်ဆုံးပရိုဂရမ်အားလုံးကိုပြောပြပြီး၎င်းသည် package တစ်ခုစီကိုကိုယ်တိုင်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းတို့ကိုဂရုစိုက်သည်။ အရာအားလုံးပြီးဆုံးသည်အထိ၎င်းသည်အထုပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးသွားသည်။ Slackware သည် Unix very နှင့်အလွန်နီးကပ်လျှင်
သငျသညျ Slackware ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်သူထံမှပို့စ်များနီးပါးမရှိသောကြောင့်သင့်ကိုချီးကျူးရပါမည်။ ငါထင်တာကတော့မင်းကစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပုံကြီးချဲ့ခဲ့တယ်။ သီအိုရီအရထိုထက်မကရှိရမည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ထူးခြားသည်မဟုတ်။ ထိုအခါငါငါ Arch နဲ့ Slackware ကိုအသုံးပြု။ တစ်ချိန်တည်းမှာခဲ့ကွောငျး။ အထူးသဖြင့် KDE ကကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်။
ငါနားလည်ပေမယ့်ငါသည်လည်းပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်လို့ခံစားရပေမယ့်အရမ်းကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာငါ့ရဲ့ Slackware ပုံစံနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး၊ ငါပျင်းလာပြီးအဲဒါကိုမေ့သွားတယ်။ Gentoo မှာအရာရာတိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာကိုငါပိုသဘောကျတယ်။
Gentoo သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းမှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တပ်ဆင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူးဆိုရငျ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်: D. Gentoo သုံးခြင်းအတွက်လည်းသင့်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီး portage အားဖြင့်တစ်ကြိမ်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်အလွယ်တကူထိန်းသိမ်းရန်အလွန်လွယ်ကူကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ Gentoo ကအထူးသဖြင့်ငါ့ကိုဆွဲဆောင်ပေမဲ့ Gentoo တပ်ဆင်မှုကနှေးကွေးနေပြီး KDE အားလုံးကိုစုစည်းဖို့ဘာမှမပြောသေးပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ installation လုပ်နေစဉ် package များကို manual ရွေးချယ်ပြီးကတည်းကငါမှတ်ချက်မပေးနိုင်တော့, ဒါကြောင့်ငါသာ KDE ကိုသာ install လုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအဖြစ်ငါစိတ်ဝင်စားခဲ့သည် applications များရှိသည်နှင့်။ ကျွန်တော့်လက်တော့ပ်မှာ core နဲ့ ram Gig ပါတဲ့ခံစားချက်က KDE ပါတဲ့ Slackware အရမ်းမြန်တယ်၊ Debian, Arch, openSUSE နဲ့ဒီကွာခြားချက်ကငါ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲ။ D. ငါထင်တာက distro တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလျော့နည်းအောင်လုပ်ဖို့ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်မှာမူတည်တယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုငါစဉ်းစားလိုက်သည်နှင့် Debian or Arch ပေါ်ရှိအနည်းဆုံး KDE installation သည်သင်လိုအပ်သော package များကိုတပ်ဆင်ရန်သင့်ကိုလှုံ့ဆော်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ Slackware တွင်၎င်းတို့ကိုမလိုအပ်သောကြောင့်အနည်းငယ်ကိုသင်လျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ Gentoo နှင့်ဆင်တူသည်မှာမတူညီသော KDE တပ်ဆင်ထားမှု ၃ ခု၊ တစ်ခုလုံးအပြည့်၊ အခြေခံတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်မလိုအပ်သော add-ons မပါဘဲစူပါဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ငါနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတစ်ခုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကောင်းပါတယ်
1GB RAM နှင့် Debian Wheezy ရှိပြီး Pentium D 2.8 Ghz ပါသောကျွန်ုပ်၏ PC တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်အခြေခံအကျဆုံးအရာများကိုရွေးချယ်သည့် KDE-Meta package ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါ KDE desktop ပေါ်ရှိနေစဉ် GNOME 3.4 သူ့ဟာသူ crash ဖြစ်သွားပြီးကျွန်ုပ်၏ desktop PC ပေါ်တွင် KDE နှင့်အဆင်ပြေပါသည်။
Slackware နဲ့ကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို virtual machine နဲ့ KDE မှာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနဲ့ပိုးထည်လိုပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် GNU / Linux distro ၏အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Slackpkg က binary package တွင်မည်သည့်မှီခိုမှုများကိုသင်တပ်ဆင်လိုသည်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည် (APT နှင့် Pacman တစ်ခါမျှမမြင်နိုင်သော) ။
ကောင်းပြီ, စွမ်းဆောင်ရည်သိသာနှင့်တွေအများကြီး။ အရာအားလုံးကအရမ်းအရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ XFCE desktop ပါရှိသောကျွန်ုပ်၏ Slackware 64bits သည် boot စတင်ပြီးနောက် 245mb RAM သုံးစွဲမှုပြသသည်။ OpenSuse (သို့) Fedora မှာ Desktop တစ်ခုတည်းမှာပဲသုံးစွဲမှု ၃၅၄mb ခန့် (လုပ်ငန်းစဉ်အချို့ကိုဖယ်ရှားပြီး)
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမဆိုလက်ရှိ repositories ကိုအသုံးပြုရန်အကြံမပြုခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် update တစ်ခုအပြီးတွင်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည် system ကိုအလိုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ GDM၊ Viewnior နှင့်အခြားပရိုဂရမ်များ (နောက်ဆုံး၌ CDl + high + F1 ကိုစတင်ရန်နှင့်စလင်းမ်သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်) GDM သည်ကျွန်ုပ်နှင့်နောက်ဆုံးအကြိမ်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
အရာအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖတ်ခြင်းကျွန်ုပ်သည်အဆင့်တစ်ခုစီမှ လွဲ၍ အားလုံးသောအဓိပ္ပာယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် -
wget သည် http://sbopkg.googlecode.com/files/sbopkg-0.37.0-noarch-1_cng.tgz
googlecode.com ပေါ် မူတည်၍ စီမံကိန်းဝက်ဘ်ဆိုက်အရတရားဝင် repos မှ dbopkg 0.37 ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်တပ်ဆင်နိုင်မည်နည်း။
အဆိုပါ distro ၏တရားဝင် repos အတွက်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပါဘူး :) ။
ငါမှာအဖြေရှိသေးသည်ဟုငါထင်သော်လည်းငါသည်နောက်ထပ်ပြောစရာရှိသေးသည်။ ငါ့ကိုစွန့်ခွာစေသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်နေရာတိုင်း၌လုံခြုံရေးပြproblemsနာများကိုရှာဖွေခြင်းထက်ပိုသောဘာမျှမလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဖြန့်ချိမှုများတွင်ရှိနှင့်ပြီးသောအချို့သောသတ်မှတ်ချက်များကိုပြုပြင်နိုင်သည့်အတွက်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရန်မလိုခဲ့ပါ။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ငါ့ထံသို့လာ၏။
Slackware နဲ့လည်းအတူတူပဲဖြစ်မယ်၊ မိနစ် ၁ ကနေလုံခြုံရေးအစီအမံတွေမရှိဘူးလား။
သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင် configure လုပ်ရမယ်။
Arch မှာကဲ့သို့သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုသင်ငြင်းပယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ Slackware installer တစ်ခုတည်းတွင်ပင်၎င်းသည် SELinux ကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းရန်စက်ရုံကိုပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များကိုမသုံးစွဲသည်။
Arch နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုကြောက်လန့်စေတဲ့အမြန်နှုန်းကသူတို့ရဲ့အထိခိုက်မခံဆုံးအစိတ်အပိုင်းများရဲ့ဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ငါ့ကို GNU / Linux တည်ငြိမ်မှုရှိ Mary Mary (Debian, Slackware နှင့် RHEL / CentOS) သို့ပြန်သွားစေခဲ့သည်။ ) ။
ကောင်းပြီ၊ Eliotime3000 သည်သင့်ကိုအဖြေပေးပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်တွေ့နိုင်သည့်အတိုင်းနောက်ထပ် configuration wizard: ufw ကိုလည်းကျွန်ုပ် install လုပ်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အား firewall (netfiter သို့မဟုတ် iptables ... သင်ခေါ်ချင်သမျှ) တွင်အလွန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသော parameter များထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ D.
ပို။ ပင်လုံခြုံရေးရရှိရန်အတွက် ssh သို့မဟုတ်အခြားဝန်ဆောင်မှုများမှသင်၏ pc ကိုကာကွယ်ရန် fail2ban ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ D.
ငါဒီ distro ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကိုင်တွယ်ချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်မှီခိုမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျထည့်သွင်းခြင်းကတကယ့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တစ်နေ့ငါနိုးလာမယ်။
ရပါတယ်။ ငါစနစ်နှင့်မှီခိုမှုများအပေါ်ပိုမိုထိန်းချုပ်ရန်အလိုအလျောက်စနစ်များမှသွားသည်ကိုကြည့်ပါ။ 😀
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး KISS distro ... အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအထိကြိုးစားခဲ့သောအကောင်းဆုံး KISS distro ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် binaries နှစ်ခုလုံးကိုသုံးခြင်း (ဥပမာအားဖြင့် Debian နှင့် slapt-get သို့မဟုတ် slackpkg ကို သုံး၍ backports မှ install လုပ်ခြင်း) သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များကိုပြုစုခြင်းဖြစ်သည်။ Gentoo (sbopkg) ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Slackware ကဲ့သို့ဖြန့်ချိမှုများမရှိ၊ တရားဝင် backports များ (Slacky.eu ကဲ့သို့) သည် bug များကိုပိုမိုသတိပြုမိပြီးတည်ငြိမ်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး source code ကိုတည်းဖြတ်သည်။
PS: Iceweasel source code ကို download လုပ်၍ sbopkg ဖြင့်တပ်ဆင်စေလိုသည်။
အမှန်မှာ D. စကားမစပ် .. သင်ယခုအဘယ်သို့ distro ကိုအသုံးပြုသလဲ? မင်းဟာ Slackware, Debian နဲ့ Arch တို့ရဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ distian က Debian ပဲ။ သူကငါ့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးတယ်။ (တစ်ယောက်ယောက်က terminal ကိုမုန်းတယ်ဆိုရင် GTK desktop ဒါမှမဟုတ် Apd က KDE ဆိုရင် center software ကို install လုပ်တယ်) ။
Slackware ၏ဘေးထွက်တွင်ငါသည် Pentium IV ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းသော Pentium IV သို့မဟုတ် Windows XP နှင့်အနိုင်နိုင်သုံးသောပီစီများနှင့်မပံ့ပိုးနိုင်သောပီစီများအတွက်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏အစ်ကိုသည်သူ၏ကွန်ပျူတာများမှ Slackware 14.1 ကို install လုပ်ရန်သူ၏ဖိုင်များအားလုံးကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် VirtualBox နှင့်အတူ XP ကို ​​ဆက်လက်၍ ပျော်မွေ့နိုင်လိမ့်မည် (၎င်းသည်၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး ၇ နှင့်သူ၏မှတ်စုစာအုပ်တွင်၎င်းကိုတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ပရိုဂရမ် PIC နှင့် PLC's) ။
eliotime .... ငါ့ကိုမသိဘဲခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် slack ထဲမှာ .. .deb package ကို install လုပ်လို့ရလား ??????
petercheco .. ပုံနှိပ်ဖို့ကြီးစွာသောလမ်းညွှန် .. မင်းငါ့ကိုနှေးကွေးစေချင်တယ်…အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကယ်၍ သင်သည် Alien packet ကိုပြောင်းပါက၊ slackpkg ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင် .deb packages ကို install လုပ်ပါ။
By? ငါအကျယ်ပြန့်ပြောပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးသုံးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအပါအ ၀ င်မြန်တယ်
အနည်းဆုံးသူကသင်မလိုချင်သောအခြား package များကိုမထည့်ပါ။
တကယ်တော့ .. တစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့တပ်ဆင်လိုသော package များကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် slackbuilds.org တွင်ရှာဖွေ။ sbopkg -i "package_name" ((မှီခိုစရာမရှိပါ)) သို့မဟုတ် sbopkg -i "name_of_dependency package_name" (for မှီခို + အထုပ်ကိုယ်နှိုက်ကို install) 😀
ဗားရှင်း 14.0 ထွက်သည့်အခါလွန်ခဲ့သောလများစွာက Slackware ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏တပ်ဆင်မှုသည်အခြားဖြန့်ဖြူးမှုများနှင့်ကွဲပြားသော်လည်းအချို့လူများကရေးဆွဲသကဲ့သို့ခက်ခဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အားဖြန့်ဝေမှုအနည်းငယ်ပေးသောလုံခြုံမှု (တရားဝင်အထုပ်အပိုးများအဆင့်တွင်) ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အမှားနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းအားအခြေခံအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်စနစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်မဟုတ်သကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်သော kernel ရှိရန်နှင့်ထို့ကြောင့်загрузချိန်ကိုလျှော့ချရန်အချိန်ဖြုန်းတုံးဟုကျွန်ုပ်ယူဆသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ များစွာသောကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုတပ်ဆင်ရာတွင်လက်ဖြင့်လုပ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဤအချက်ကိုတိတိကျကျဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်မတက်မည်ဆိုပါက packages ၁၀၀ ကျော်နှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
ပုံမှန်အားဖြင့် Slackware installer သည်သင်မည်သည့် package များ (အခြေခံအကျဆုံးမှ KDE game packages များကဲ့သို့သော) အထိထည့်သွင်းမည်ကိုစာရင်းပြလိမ့်မည်။ သို့သော်အမှန်အကန်အားပြောရလျှင် kernel boot သည် system နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ UNIX / BSD နှင့်ဆင်တူသော boot သည် (အမှန်စင်စစ် OpenBSD သည် archers များအတွက်အမြဲကြာသည်)
ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်သဘောမတူနိုင်ပါ။ A, AP, D, F, K, L, N, X ဆော့ဗ်ဝဲအုပ်စုများကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ သင်ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်သင်လိုချင်သမျှကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဒီအကြောင်းအနည်းငယ်ပို - http://www.slackwiki.com/Minimal_System
slack ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရင်ဒီလမ်းညွှန်ကကောင်းတယ်၊ ငါဟာ Arch user တစ်ယောက်ပါလို့ထင်တယ်။ ငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်စေတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မင်းမှာစာလုံးပေါင်းအမှားအယွင်းများစွာ (အထူးသဖြင့်အသံထွက်မပါဘဲရိုးရှင်းသောကြိယာများအတိတ်) ဖြစ်သည်။ ငါထင်တာကအဲဒါကိုအမြဲတမ်းဘာမှမလုပ်ပဲယူနေပေမယ့်ဘယ်စာမျက်နှာမဆိုအဲဒီအမှားတွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ် Linux ကနေသူတို့လုပ်တာပိုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
@Petercheco သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စာလုံးပေါင်းမကောင်းသောကြောင့်သူ့ကိုအပြစ်တင်လို့မရပါ (တကယ်တော့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဘာသာစကားနှစ်မျိုး (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသောစာရေးခြင်းသည်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သည်) ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်ထက် ပို၍ ပြည့်စုံကြောင်း၊ အကြွေးထပ်ဆောင်းထိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Debian အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းဖြန့်ဖြူးမှုအားလုံးနီးပါး၊ အနည်းဆုံးမူရင်းမှရရှိသောမူရင်းဖြန့်ဝေမှုများအားလုံးနီးပါးကို virtualizing ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ Slackware သည်ငါအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ slackbuilds ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အစတွင်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း ArchLinux ရှိ AUR ၏အသုံးပြုမှုထက်မပိုပေ။
Debian ကဲ့သို့ slackware များသည်တည်ငြိမ်မှုကိုအဓိကထားသည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဟုတ်မဟုတ်၊ မမှားပါစေ၊ ၎င်းသည် Lilo ကို grub အစား bootloader အဖြစ်အသုံးပြုဆဲတစ်ခုတည်းသောဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။
ငါထင်ထားတာကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြန့်ဖြူးပုံရတယ်၊ ငါ Debian ဆီမှ 'သွားရင်ငါဟာ Slackware ကွန်ယက်တွေထဲကိုကျသွားမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Gentoo ဟာသုံးစွဲဖို့ပိုရှုပ်ထွေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာအခြားလွဲမှားသောစာလုံးပေါင်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှာညနေ ၁၂း၃၀ မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးတဲ့အခါမှာဒါကဖြစ်ပျက်နေတယ်။ D. ထို့အပြင်စပိန်စကားပြောသူများသည်စာလုံးပေါင်းအမှားများကိုကျူးလွန်မိသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ D.
ငါသဘောတူတယ်။ ပြည်သူလူထုသည် vien, lonchua casteyana ၏ဇန်နဝါရီ verdaderos hanimales ကိုမရေးတတ်ပါ။
Petercheco ကချက်စကားနဲ့အခုရေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ စပိန်ဘာသာဟာသူ့မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်သင်ခန်းစာမှာငါတို့သူငယ်ချင်းဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုပိုနားလည်လာလိမ့်မယ်။
သင်၏မှတ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏နေ့လည်ခင်းကိုပျော်ရွှင်စွာဖြစ်စေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)။ ငါဆယ်မိနစ်မိနစ်ခန့်ရယ်မောတယ်ပြောသောအခါငါလေးနက်တယ်
ကျွန်ုပ်၏ repository configuration အစိတ်အပိုင်းတွင် reposmentment လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပထမ ဦး ဆုံးပေါ်လာသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ repository ကိုပျက်ကွက်ကိစ္စတွင်၌တည်ရှိ၏။
ငါဒီ Slackware ဆောင်းပါးကိုလုံးဝသဘောတူပေမယ့် Lan ကွန်ယက်ကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာပြranနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ကွန်ယက်ပြproblemနာအတွက်ဖြေရှင်းနည်းတွေကြောင့်၊ openuse ကိုငါပြန်သွားလိုက်ပြီ၊ တစ် ဦး Lan ၏ configuration ကို။ လေ့လာချင်သောအချိန်နှင့်သင်ယူရန်အချိန်ရှိသူများကိုကျွန်ုပ်ချီးကျူးပါသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူအနေဖြင့်မြန်ဆန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေသည့်အခါ Slackware ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။
တပ်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ သင်ကွန်ယက်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်တပ်ဆင်သူကမေးလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့ပြောပြီး Network Manager option ကိုရွေးချယ်ပါ။ သတိထားပါ၊ ရွေးချယ်စရာလေးခုရှိပြီးတစ်ခုမှာ DHCP ဖြစ်သည်။ Network Manager မဟုတ်လျှင် DHCP ကိုမရွေးပါနှင့်။ သင်၏ network connection များကို Network Manager မှစီမံမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းသည်
slackware ကို Nec Versa M320 တွင်ကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးသင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါသည်။ အထူးသဖြင့် sbopkg -i "kcm_touchpad" သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ touchpad အလုပ်မလုပ်ပါ
ငါလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပေမယ့်ပျင်းရိ 14.1 များအတွက်အဖြေကိုရှာမတွေ့ပါ။
ငါ x11 configuration file ကိုလက်နဲ့တည်းဖြတ်ရမလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ဖော်ပြပါ package ကိုထည့်သွင်းသောအခါသင်၏ touchpad ကို KDE system preferences -> input devices -> touchpad တွင် configure လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အကယ်၍ KDE ကိုသုံးမည့်အစား XFCE ကိုသုံးပါက xfce center -> mouse နှင့် touchpad သို့သွားပြီးလိုချင်သော settings ကိုလုပ်ပါ။
ဒီစနစ်ကကျွန်တော့် touchpad ကိုမဖော်ထုတ်ဘူး။ ငါ kde မှ touchpad ပြင်ဆင်မှုကိုထည့်သောအခါသတင်းအချက်အလက်များတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို Touchpad အမည်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ကိရိယာရှာမတွေ့ပါ
မင်းရဲ့ကိစ္စကိုအရမ်းသိချင်တယ် .. Touchpad ကလုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူးလား စနစ်ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ခဲ့တာလဲ
အားလုံးအဘယ်အရာကိုမျှအကျင့်ကိုကျင့်။ Installation ကိုဒီသင်ခန်းစာအတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်။
Kernel က touchpad ရှိသလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မပြောခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏တင်သည့် Post-installation အကြောင်းပါ။
သင့်ရဲ့ touchpad ကိုအထောက်အပံ့မပြုနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒါကိုငါပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ဖူးတယ် :) သင် install လုပ်နေစဉ်အတွင်း package group X ကိုတပ်ဆင်ထားလျှင်သင့် touchpad သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သင့်သည်။
Slacware ထည့်သွင်းမှုတွင်သင်မည်သည့် mouse ကိုအသုံးပြုလိုသည်ကိုမေးမြန်းရန်ခဏတာပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပုံမှန်Vídně: imps2mouse ကိုရွေးချယ်ရမည်။
အကယ်၍ သင်ဟာ manual configure လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ /usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရပါမယ်။
ကောင်းကောင်းအကျိုးပြုပါတယ်၊ ငါ slackware ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမသုံးခဲ့ဖူးပါ၊ ဒီဖြန့်ဖြူးမှုနဲ့ GNU / Linux ကိုဗားရှင်း ၁၀ နဲ့စခဲ့တာ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟေးငါထပ်မံကြိုးစားမယ်၊ လမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အလွန်ကောင်းသော post ကို; ပိုမိုမြင့်မားလေပိုကောင်းလေ၊ အခြားသင်ခန်းစာများနှင့်အပြန်အလှန်မဖြစ်နိုင်သောဆက်တင်များကိုအမြဲတမ်းသင်ယူနိုင်သည်။
Slackware တွင်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုမှာ KDE ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များပြေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည် Archlinux ထက်အနည်းငယ် ပို၍ သွက်လက်သောသတိပြုမိမှုဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်၊ Gentoo နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမေးခွန်းထုတ်နိုင်သလား။
ငါဟာသင့်ရဲ့ CentOS vs vs custom kernel နဲ့ stock kernel ပါတဲ့ Slackware ပါမယ်…ပိုအားသာချက်ရှိတဲ့ CPU stress ကိုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ မြန်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုကြည့်ရအောင်။
အိုကေ၊ virtual machine နှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပါ။ တစ်ခုမှာအနည်းဆုံး Slackware တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အနည်းဆုံး CentOS အနည်းဆုံးပါသည့် CentOS တစ်ခုထည့်ပါ။ အနည်းဆုံး Slackware တပ်ဆင်ရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအုပ်စုများကိုတပ်ဆင်ပါ - http://www.slackwiki.com/Minimal_System) နှင့်သင်၏ရလဒ်များကိုထုတ်ဝေ😀
အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါး၊ ဂုဏ်ပြုလွှာ၊ ကျွန်ုပ်ဒီစမ်းသပ်မှုကိုစမ်းသပ်ချင်ပြီ။ ငါ့ကို ISO ကိုချက်ချင်းနိမ့်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။
မေးခွန်းအနည်းငယ်မျှသာ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စမ်းသပ်စက်တွင်ထည့်သွင်းတော့မည်။ အခြားနေရာများ၌ Debian Jessie၊ Arch၊ Ubuntu 14.04၊ OpenSuse, KaOs, Trsiquel နှင့် GRUB2 မှ boot လုပ်သည်။ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးမှာမင်း Lilo အကြောင်းပြောပြတယ် (အဲဒီအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ) ။
မေးခွန်းကတော့ LilUB အစား GRUB2 ကို install လုပ်ပြီးသင် install လုပ်ထားသောအခြား distros များကိုအသိအမှတ်ပြုပါသလား။
မင်္ဂလာပါEssaúနှင့်သင့်မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ D. တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း Lilo သည်အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ပါသည်။
Slackware DVD တွင်လာသည့် grub (grub2) ကိုအောက်ပါအဆင့်များဖြင့်သင် install လုပ်နိုင်သည် -
သငျသညျ Slackware ကို install ပြီးတာနဲ့ဤမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်: "Slackware Linux ကို၏တပ်ဆင်ခြင်းပြီးပြီ။ "
ထိုအ voila: D .. ဒီအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက:
Lilo သည်လုံးဝစွန့်ပစ်ထားသောစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သောနောက်ဆုံး version ကိုလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည် (ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၃) နှင့်ယနေ့ Slackware သည် UEFI မှ Lilo နှင့်အတူပံ့ပိုးထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလအနည်းငယ်အကြာတွင်သူသည်နောင်တရပြီးနောင်တွင် rhel သို့ပြန်သွားခဲ့သည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ Hoigo ကလေထဲကိုတိုးတိုးလေးတိုးတိုးလေးတိုးတိုးလေးတိုးတိုးတိုးတိတ်တိတ်မေးလိုက်သည်။ ငါအရမ်းသဘောကျနေပြီးအရာရာတိုင်းကိုငါ့လက်ထဲကိုင်ထားမိသည်။ ထို့အပြင်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်သည် repositories ပေါင်းသည့် ဦး စားပေးများ၊ deb သို့မဟုတ် rpm packages များနှင့်၎င်းတို့၏မှီခိုမှုများကိုမေ့နေသည်။ D. Slackware ၏မိခင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားရပြီးယနေ့ခေတ်ပက်ထရစ် Volkerding ၏ linux နှင့်ပတ်သက်သောအတွေးအခေါ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလာသည်။
မေးခွန်းတစ်ခု - ကျွန်ုပ်တွင် desktop နှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက် ပို၍ တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ ဥပမာအားဖြင့်ယနေ့ KDE မှမနက်ဖြန် XFCE နှင့်နောက်အပတ် Cinnamon နှင့်စတင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ သင့်မှာ scripts များစွာရှိနိုင်တယ်။ Cinnamon ကို compile လုပ်ရမယ်။ D.
အလွန်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ၊ ကျွန်တော်ဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက Slackware ကိုသုံးခဲ့ပြီးဆာဗာတွေမှာလည်းတစ်ခါမှပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး။ တရားဝင် repositories ထဲမှာပါတဲ့ package တွေလုံလောက်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုငါမှာ slackbuilds ကနေ packages တွေမထည့်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်၌၎င်းကို vlc ကဲ့သို့သော package များအတွက် slackbuilds ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည် ./configure && make & install လုပ်ခြင်းကိုအခြားသူများအကြားအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်။
အော်စကာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါဟာ Slackware ကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ 🙂
wow, သင်အတော်လေး hacker တစ် ဦး ဖြစ်ရမည် :) ။
သငျသညျ slackware ကနေအခြားဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်သောအခါ, သင်ပြန်လည်သို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်သလဲ?
၁ ° / etc / slackpkg / mirrors တွင်ဗားရှင်းအသစ်၏ repos ကိုထည့်ပါ
ဒုတိယအကြိမ် update ကို -
slackpkg စစ်ဆေး - မွမ်းမံမှုများ
slackpkg အဆင့်မြှင့် - အားလုံး
configuration ကိုသိမ်းဆည်းရန်စာလုံး K ကိုရွေးပါ။ သို့သော်အသစ်သော configuration များကိုကြည့်ပါ
install အသစ် -3slackpkg
ဟုတ်ပါတယ်၊ Slackware ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်တာကြောင့်သန့်ရှင်းတဲ့တပ်ဆင်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ချင်တယ်။ နှစ်ခုမှသုံးခုစလုံးကိုဗားရှင်းမှဗားရှင်းသို့မွမ်းမံရန်မလိုအပ်။ since
Slackware၊ ကြီးတယ်၊ ငါအများကြီးလေ့လာနေတယ်။
ပို့ကုန် LANG = es_XX.utf8
ပို့ကုန် LANGUAGE = es_XX.utf8
ပို့ကုန် LINGUAS = es_XX.utf8
ပို့ကုန် LC_ALL = es_XX.utf8
လက်တင်အမေရိက (သို့) စပိန်စကားလုံးမသုံးပါ။ (ငါရေးလို့မရဘူးဆိုတာသင်တွေ့နိုင်သည်။ ) olpc / es-olpc | olpc / es-olpc.map ကိုကျွန်ုပ်ရွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်တပ်ဆင်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ အဲဒါကို slackbuilds တွင် fixed နိုင်ပါသလား? Installation တွင်ဘာကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ခဲ့သနည်း။ ကျွန်ုပ်ဘာတွေပြုပြင်မလဲ။ လေးစားပါတယ်
Terminal ကို root မပါဘဲဖွင့်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ (ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ username နှင့်) ။
ယေဘူယျအားဖြင့်သင်အသုံးပြုသော desktop ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကီးဘုတ်ကိုတိုက်ရိုက် configure လုပ်နိုင်သည်။
/etc/profile.d/lang.sh သွင်းသည်ဟုသင်ပြောသော်လည်းသင် /etc/profile.d/lang.csh ကိုလည်းသတ်မှတ်ခဲ့သလား။
ပို့ကုန် LANG = es_ES.utf8
Chamaeleonidae မျိုးဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါ slackware 13 ကတည်းက slackware အသုံးပြုသူဖြစ်နှင့်အမှန်တရားက, ငါ့ hard drive ပေါ်တွင်ရှိသည်သောအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်, ငါအခြားသူများကိုကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါအစဉ်အမြဲ slackware ကို (Gentoo ငါချင်တယ်) သို့ပြန်သွားကြပြီယခုငါစဉ်းစားတစ်ခုတည်းသောအရာသည်တည်ငြိမ်သို့မဟုတ်လက်ရှိဖြစ်သနည်း
ငါပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဥပမာ irc ရှိစပိန်စကားပြောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်မှုများစွာရှိသောတက်ကြွသောဖိုရမ်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း၏သံသယများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသင်ယူရပါမည်။ အမှားအယွင်း ၁၀၀ မှားပါကလူအများကဤအံ့ဖွယ် Gnu / linux distro ကိုကြောက်ရွံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
စာရေးသူနှင့်ဤ post ကိုလူတို့အားချီးကျူးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုယူပြီးသူတို့သံသယများကျဆင်းသွားခြင်းအားဖြင့်လူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူခြင်း၊ (linux မေးခွန်းများ) ၏ဤမျှလောက်ပစ်။
တစ်စုံတစ် ဦး က sbopkg သို့မဟုတ် slackpkg ကိုဘာကြောင့်မထည့်သွင်းရသနည်းဟုမေးသည်မှာပိုမိုမြင့်မားသည်။ အဖြေမှာရိုးရှင်းပြီး၎င်းတို့သည်ရွေးချယ်နိုင်သည့် package များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် KISS အတွေးအခေါ်ကိုချိုးဖျက်သည် slackware64 သည် 32bits နှင့်လိုက်ဖက်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်းသည် "အဆင်သင့်" ဖြစ်သော်လည်းသင်၌ရှိသည် 32-bit software ကို run / compile လုပ်နိူင်ဖို့ software layer ကိုထည့်မယ်။
အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကလည်း kde မှအခြားပတ်ဝန်းကျင်သို့မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Petercheco ပြောတဲ့အတိုင်း compile လုပ်လိုက်ပြီး terminal မှာ run လိုက်တာနဲ့။ $ xwmconfig
သင်လိုချင်သော (ယခင်ကထည့်သွင်းခဲ့သော) သင်ရွေးချယ်နိုင်သောနေရာမီနူးတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် X, $ startx ကိုနောက်ပိတ်လိုက်သည်။
သင်၏အဖြေကိုပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ post ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သဘောတူလက်ခံပါသည်။ Slackware နှင့် ပတ်သက်၍ စပိန်စကားပြောဝက်ဘ်ဆိုက်များပိုမိုလိုအပ်သည်။ D.
# slackware-es de freenode မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာကိုဝမ်းနည်းရင်၊ Slackeros, Slackos သို့မဟုတ်အခြားအမည်များစတဲ့ကွဲပြားတဲ့ချန်နယ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ irc လိုင်းတွေရဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာကစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲ။ သူတို့ကိုအသုံးပြုသူများနှင့်များစွာသောအသုံးပြုသူများနှင့်အတူ။
အပေါ်က Slackpkg ကိုထည့်ပြီး slack-get meant ဆိုလိုတာက slackpkg ပါဝင်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ slackware ကိုကြံဆက်လက်ပေးအပ်ရန်
မင်္ဂလာပါ Petercheco 🙂
ငါဒီ post ကို Slackware ကို install ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမှန်းအကြောင်းကိုကြိုက်တယ်။ ၎င်းသည် OS * Linux ကိုစမ်းသပ်လိုသူတိုင်းအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။
ငါက ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက Slackware ကိုသုံးတယ်။ အခု Slackware 1994 ။
သို့သော် nVidia Optimus ကဒ်ထောက်ပံ့မှုသည်ပျင်းရိခြင်းအတွက်လိုအပ်သကဲ့သို့မရင့်ကျက်သောကြောင့်လပေါင်းများစွာကျွန်တော်မသုံးခဲ့ပါ။
nVidia ကဒ်ပြားကိုအဆက်ပြတ်ရန် "bumblebbe နှင့် bbswitch" packages များကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်ငါ i7 ၏ပေါင်းစည်းထားသော Intel မှထွက်ခွာခဲ့သည်။
သင်၏ပို့စ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအစုများကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားစဉ်က“ 32 bits နှင့်မကိုက်ညီသော !!”
ကျွန်တော်ရှာဖွေမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး nVidia driver နှင့် nVidia Optimus ကဒ်များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြထားသောဤ HOWTO ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ... စနစ်ကို "multilib" အဖြစ်ပြောင်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါကငါမခံစားရဘူး!
ကျွန်ုပ်သည် Slackware Linux 64 bit အစစ်ရှိလျှင်၊ ငါလိုမျိုးဖြစ်ချင်လို့ပါ။ 32-bit အတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အလွှာထည့်တာဟာငါနဲ့မတော်ပါဘူး။
ငါသိ၏နောက်ခံအခက်အခဲမှာ nvidia သည်၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များကို GNU / Linux ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လုံလောက်သောပံ့ပိုးမှုမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီ multilib system ကိုမသုံးပဲဒီဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်မှုကိုခွင့်ပြုပေးသည့်အပြင် external အထောက်အပံ့အချို့ရှိရန်ကျွန်ုပ်စောင့်ရမည်။
ငါ့ကိုသတိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂ကျွန်ုပ်သည်လအနည်းငယ်အထိ Slack မစတင်ခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Linux Mint 17 နှင့် nVidia Optimos သည် (Noveau drivers) နှင့်ထည့်သွင်းမှုမှတပ်ဆင်မှုတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်နှင့်အဆင်ပြေသဖြင့်၎င်းသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုမေ့လျော့သွားသည်။
သုံးစွဲသူများသည် Slackware ကိုနှစ်သက်ကြသည် !!! 🙂
သင်၏ပုံများသည် Enlightenment 16 like ကဲ့သို့သော ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာနှင့်ပိုကြည့်ကောင်းမည်
အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း။ ငါ distro ကနေ distro ခဏခုန်နေခဲ့ပေမယ့် KDE နဲ့ Slackware ကိုပြန်ခဲ့ရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာ Slackware Current နဲ့ Slackware 14.2 သို့မဟုတ် 15 ကိုငါတို့မြင်ရလိမ့်မယ်။
အလွန်ကောင်းတဲ့ petercheco ဆောင်းပါး!
ယနေ့အချိန်အထိဒီ distro ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ windows နဲ့ Gnu / Linux အကြားအကူးအပြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းသူနှင့်သီအိုရီအရပိုမိုလွယ်ကူသောအခြားသူများကိုငါအမြဲရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ keyboard နဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါရှုပ်ထွေးတယ်လို့မထင်ဘူး။
သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ဆောင်းပါး၏ကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်ကိုတွေ့ရတာ ၀ မ်းသာပါတယ် :) နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
ဟယ်လိုသူငယ်ချင်းများကျွန်ုပ်သည် LWP ကို ​​install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မည်။ slackware သို့ကျွန်ုပ်အသစ်ရောက်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
slackware အသစ်များအတွက်ကောင်းမွန်သောပို့စ်တစ်ခုသင်ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာအကျိုးပြုခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ distro ကိုသုံးသည်။
slackware နှင့်ပတ်သက်သောအလွန်ကြီးစွာသောအရာကမလိုအပ်လျှင်မဟုတ်လျှင်အများကြီးပြောင်းလဲသွားသည်မဟုတ်ပါ။ အခုအသစ်ထွက်တဲ့ slackware 14.2 အသစ်ထွက်လာပါပြီ။ ငွေဖြည့်သည့်အရာအသစ်တစ်ခုကိုစောင့်နေပါသလား။
ကျွန်ုပ်သည်ဤ distro အသစ်နှင့် KDE Plasma5ကို Slackware 14.2 တွင်တပ်ဆင်နိုင်ကြောင်း LinuxQuestion တွင်ဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။
AlienBob repository ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
ကျွန်တော်ဒီကိုလာဖို့မတော်တဆရောက်လာခဲ့တာပါ။ Slackware ကိုကြိုးစားချင်သောကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ထိတိုင်ကျွန်ုပ်၏ desktop PC တွင်အောင်မြင်မှုမရှိခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ အခုတော့ linux ထဲကိုအထူးသဖြင့် (Slackware / Zenwalk) နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွားဖို့အခုတော့လက်တော့ပ်ပေါ်မှာတင်လိုက်သည်။
အစပိုင်းမှာတော့ခက်တယ်၊ windows ကနေ ubuntu / linuxmint ... hahaha လိုမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါ linux ကိုအများကြီးသုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်။
ငါ distros အမြောက်အများကိုကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်တော့ဒီတစ်ခုက linux နဲ့ငါ့လေ့လာမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပါ။ ငါ၌ Freebsd သောကျောင်းဟောင်းမှအခြားတစ်ခုကျန်သေးသည်။
Slackware ဖြန့်ဖြူးပုံကိုမည်သူမဆိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ Lifelak ကိုငါစမ်းကြည့်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာဘယ် command တွေလဲမသိဘူး။
အမျိုးမျိုးသောဖြန့်ဖြူးမှုများ၊ linux, bsd, windows, osx နှင့် 12 နှစ်ကြာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးအမှားအယွင်းများပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သောစနစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် client များစက်များကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ စနစ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တည်ငြိမ်သောအရာတစ်ခုလိုအပ်သည်၊ ပြီးတော့လေ့လာတာက wifislax နဲ့စတာ။ ကျွန်တော်အရမ်းကြည့်တာက slackware ကိုအခြေခံတယ်။ နောက်အဆင့်အားလုံးရဲ့သုံးစွဲသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖတ်တယ်။ ရှာဖွေမှုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။
Classic Theme Restorer: မူလ Firefox interface သို့ပြန်သွားသည်